Wasaaradda arrimaha dibedda Mareykanka waxay farriin u direysaa Ra'iisul Wasaare ROOBLE - Axadle - Axadle Wararka Maanta
Washington (Axadle) – Waaxda Arimaha Dibada ee Mareykanka u qaabilsan Arimaha Afrika ayaa ugu baaqday hogaamiyaasha Soomaalida ee la filayo inay isugu yimaadaan Caasimadda Muqdisho si ay uga faa’iideystaan ​​fursada iyo dhameystirka heshiiska doorashada.
Qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska ayaa sidoo kale fariin loogu diray ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo hogaaminaya wadahadalada, isagoo sheegay inuu taageero buuxda ka haysto dowlada Mareykanka.
“Madaxda Soomaalida waa inay ka faa’iideystaan ​​fursada ay ku soo gabagabeynayaan heshiis doorasho oo u wanaagsan dadkooda iyo dalkooda. “Ra’iisul wasaare Rooble wuxuu heystaa taageero buuxda,” ayaa lagu yiri bayaanka.
Qoraalka Mareykanka wuxuu raacay qoraalkii maalimn ka hor hoggaamintiisa bulshada caalamka inuu lumiyo fursdadan looga digay.
“Saaxiibbada Soomaaliya ee Beesha Caalamka waxay u arkaan Shirka Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ee soo socda – Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka (DFS-DGXDF) ee ka dhacaya Muqdisho inay tahay fursad muhiim ah oo aan la seegi karin. Dhiirrigelinta nabadda iyo amniga Soomaaliya,” ayaa lagu yiri bayaanka.
Madaxweynaha HirShabeelle Cali Guudlaawe ayaa wali ka maqan magaalada waxaana la filayaa inuu yimaado maalinta Sabtida iyadoo ay jiraan warar sheegaya in shirka Afrisyon uu si rasmi ah u furmi doono maalinta Axada ee taariikhdu tahay 23-ka May 2021.
Shirka ayaa kaga duwan shirarkii hore in uu shir gudoominayay raiisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaana meesha ka baxay hogaankii madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday maxamed c / llahi farmaajo oo lagu eedeeyay fashilka shirka.
Rajo weyn ayaa laga qabaa in shirka lagu guuleysto iyadoo loo heellan yahay heshiis, in kasta oo loolankii hore iyo xiisadaha siyaasadeed ee uu abuuray Farmaajo.
Abdiwahab Ahmed 3143 posts
first stone laid within the dry harbor in